Shanghai Air Industry & Trade Co., Ltd. dia miorina ao Shanghai ary manampahaizana manokana amin'ny famokarana sy fanondranana karazana compresseur rivotra sy fitaovana fitsaboana ny rivotra. Izahay dia mikendry ny hanome serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka miaraka amin'ny vokatra manara-penitra sy vahaolana amin'ny angovo azo avy amin'ny angovo.
Ny vokatra dia manarona paompy rivotra piston, compresseur rivotra mivantana, fantsom-pamokarana entin'ny fehikibo, compresseur rivotra tsy misy solika, compresseur rivotra mihodina, fanamainana rivotra, sivana rivotra ary kojakoja rehetra amin'ireo vokatra ireo. Ny orinasanay dia niditra tamin'ny sehatry ny compressor mihoatra ny 20 taona, ary mandrakotra 8500 metatra toradroa miaraka amina mpiasa 200. Nandalo ISO9001: fanamarinana rafitra kalitao 2008 izahay ary nanolo-tena tamin'ny fikarohana ara-teknika, ny famokarana ary ny fifehezana ny kalitao henjana.
Afa-tsy ireo compresseur rivotra voalaza etsy ambony, ny ekipanay dia nanangona loharanon-karena sy traikefa manan-karena amin'ny sehatry ny paompin-drano nandritra ny taona lasa. Mba hanomezana tolotra sy fanamorana bebe kokoa ho an'ny mpanjifa, ny Shanghai Air koa dia mamatsy paompy rano sy vahaolana amin'ny rafitra fitsaboana rano miaraka amin'ny fifaninanana sy fifehezana kalitao tsara indrindra.
Mahazo ny fahatokisan'ny mpanjifanay sy fahafaham-po anay izahay amin'ny alàlan'ny famokarana vokatra avo lenta avo lenta ho an'ny indostria rehetra. Ny vokatray rehetra dia natao ho an'ny fampisehoana azo antoka, fikojakojana mora ary fahombiazan'ny angovo betsaka indrindra. Izahay dia nanondrana any amin'ny firenena maherin'ny 90 manerana ny tany manerantany toa an'i Etazonia, Eropa Atsinanana, Azia atsimo ary Amerika Latina ary mahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifa.
Ny Shanghai Air dia manavao hatrany ny fivoaran'ny vokatra sy ny fitantanana hamaly ny fitakian'ny mpanjifa. Miorina amin'ny fitsipiky ny orinasa "Quality First, Customer Centered,", Shanghai Air dia manohy manome ny mpanjifa vokatra tsara kalitao indrindra, vahaolana mitsitsy angovo ary serivisy kalitao miaraka amin'ny haitao mandroso sy fitaovana tsara indrindra.
☆ Miaraka amin'ny haitao mandroso sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao henjana mba hanomezana vokatra avo lenta mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
☆ Manomeza serivisy OEM sy ny vokatra azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
☆ Famokarana fahombiazana avo lenta hiantohana ny ora fandefasana haingana indrindra.
☆ Teknolojia serivisy voaofana amin'ny orinasa ary serivisy serivisy 24hous mba hiantohana ny serivisy aorian'ny varotra matihanina sy ara-potoana.
☆ Miresaka Anglisy, Espaniôla, Frantsay, Rosiana ary Arabo ny solontenan'ny mpivarotra, izay manamora ny fifandraisan'ny mpanjifantsika sy eran-tany amintsika.
Ho manam-pahaizana vahaolana amin'ny rivotra azo antoka indrindra eto amin'izao tontolo izao
Manamboara ny ho avy amin'ny kalitao, mahazoa voninahitra amin'ny fahamendrehana.
Miorina ny mpanjifa, miorina amin'ny fahamendrehana sy ny kalitao, ny fanavaozana ary ny valim-pifidianana.
Politika manerantany momba ny kalitaon'ny rivotra
Tadidio foana fa ny kalitao no fototra, izany no antony isafidianan'ny mpanjifa antsika.
Soatoavina lehibe momba ny rivotra manerantany
Mikatsaka fampandrosoana tsara, tohizo ny fianarana sy ny fanavaozana ary ny maha-matihanina sy manolo-tena.